Archive du 07-oct-2020
Teknika fanaovana lissage natoraly, mahomby
Azo atao tsara ny manatsotra ny volo na manao « lissage » aminny alalanireo akora natoraly.
Lamoria hatao gratin by Toky
Akora ilaina : · Lamoria 500g · Ronono 5 dl · Crème 2 dl · Tongolo gasy 3 · Ravintsara na laurier raviny 1 · Ovy 750g · Tongolo 2 · Menaka 2 dl · Lafarina 50g · Dibera 50g · Muscade · Sira sy dipoavatra · Menaka hanendasana
Soin du visage aminizay akora misy ao an-trano
Atoronay anao eto aminny Jejoo anio ilay fomba fanadiovana tanteraka ny tarehy aminny fomba natoraly ao an-trano, aminny alalanizay akora anananao ao. Ilay fanadiovana ifotony miampy fikolokoloana tarehy, tahaka ny fanao any aminny salon izy ity, saingy ataonao irery ao an-trano.
ireo tsy azo hatao
Matsiro tokoa ny smoothie ary isanny hankafizintsika vehivavy manokana. Misy teboka 7 mila fantarina anefa ireto, mba hitazonana ilay tsirony sy ilay sakafo tena ara-pahasalamana azy.
Hatraiza no fetranny fandeferana eo aminny mpifankatia ?
Ratsimba Olivia: Ny fandeferana dia fanekena fa tsy mitovy aminao ny olona iray, manana hevitra samihafa aminny anao izy. Izany akory tsy midika fa dia hanaiky fahatany izay rehetra hataony kosa.
Sira : Tsy tokony ho fadiana mihitsy!
Mety ho noho ny vohoka, ny tosi-drà, ny toe-batana, te-hampihena tena dia manapa-kevitra ny hifady sira ny olona iray. Azo atao ve ny mifady sira?
Marina ve fa ny tovovavy maditra no tena mahita fiainana ? Izaho mantsy zaza hendry foana, dia lazainny olona tsy mahita fiainana.
Ny dikanny hoe : nahita fiainana mihitsy eto, no tsara apetraka. Samy manana ny fiainana niainany mantsy ny olona tsirairay,
Inona no mahatonga ny tanora hanambady aloha loatra?
Ben J : Ny antony voalohany amiko dia ny tsy fahampianny zavatra hatao. Eo ihany koa ny fitaizana satria zary lasa tsy manana tanjona na ambition ny zaza rehefa tsy voapetraka ao an-tsainy fa tsy tokony ho maika ny hanambady izy.
Brad Pitt sy Angelina Jolia : Mbola tsy tafasaraka ofisialy foana
Volana maromaro izay no nisaraka i Brad Pitt sy Angelina Jolie. Na izany aza nefa dia tsy mbola nivoaka ny didy mahakasika ny fitaizana ny zanakizy ireo.
Shopping Produits Bio
1. Foie gras  25.000Ar/ 250g  12.000Ar/ 100g - « 2 pots achetés = 1 pot offert » - Cooking Live Contact : 034 86 534 80 2.
Manga atao smoothie
Miady amin'ny fiandronanny rano ao anaty vatana sady mampihena ary manafisaka kibo ny smoothie aminny manga.
« Bouquet de Fleur » : Matihanina aminny famoronana fehezam-boninkazo
Mahalaza hevitra maro ny fehezam-boninkazo ary mahasolo teny mamy sy fankaherezana izy ireny aminny ankapobeny.
LOZA ATERAKY NY MOTO 39 tato anatinny 3 volana
Mitombo isa hatrany ireo loza ateraky ny kodiaran-droa na ny moto eto amintsika. Raha araka ny fantatra mantsy dia nahatratra 39 isa izany tao anatinny 3 volana raha mitontaly 55
EPP ANTANDROKOMBY Hampandoavina 30.000 Ar ny ankizy
Raha efa nampahafantarina tamim-pomba ôfisialy fa tsy mandoa sara-pisoratana anarana intsony manomboka aminity taom-pianarana vaovao ity ireo mpianatra manovo fahalalana eny anivonny sekolim-panjakana dia mbola misy ihany ireo manao izany.
MORONDAVA Zaza 11 taona , naolana
Mirongatra hatrany ny fanolanana zaza amam-behivavy eto amintsika. Zazavavy kely iray vao 11 taona monja indray no naolana tovolahy iray efa 19 taona tany aminny distrikani Morondava.
FIVAPOVA Nanolotra aide scolaire ho ana zanaka polisy 90
Zanaka polisy miasa ao aminny kaomisarianAlasora miisa 90 no notolorana tohana fanabezana na aide scolaire ho fanamaivanana ny fidiranny mpianatra.
Kitra : Mikarakara fifantenana ho anny ankizy ny 67 City FC
Fialamboly sady fitaizam-batana tena ankafizinny lahikely ny kitra.